Libaaxii ugu Caansanaa wadanka Zimbaabwe oo nin Maraykan ahi Dilay +Daawo Sawiro Qurux badan. |
Libaaxii ugu Caansanaa wadanka Zimbaabwe oo nin Maraykan ahi Dilay +Daawo Sawiro Qurux badan.
Cecil waxa uu ahaa Libaax caan ka ah wadanka Zimbabwe iyo guud ahaan Qaarada Afrika ,Libaaxan ayaa ahaa mid si wayn ay u jecel yihiin dadka dalxiisayaasha ahi marka ay tagaan Seeraha wayn ee xayawaanka lagu xanaaneeyo ee Hwange National Park.
Intii aan la dilin ka hore 1 da bishii July ,Cecil waxa uu ahaa mid si wayn usoo jiita dadka Seerahaasi soo booqda waxaanu ogolaan jiray in Gaadiidku usoo dhawaadaan isagoo marmarna daba gali jiray Baabuurta si dadku Sawiro aad u dhaw uga qaataan.
Cecil waxa uu horjooge u ahaa 18 libaax oo isugu jira 12 gool ah iyo 6 yaryar oo Cagabaruur waxana la hogaamin jiray kooxdan libaax kale oo loogu yeedho Jericho..
Waxa la rumaysan yahay dhimashadiisa ka dib in 6 da yaryar ee Cagabaruurka ah la dili doono maadama Libaaxa cusub ee dhaxlay xukunkii Cecil aanu jeclayn inay noolaadaan.sidaana waxa sheegay dadka Seerahaa ilaaliya ee aqoonta u leh dhaqanka Libaaxyada.
Sawirkani waa Cecil oo la dagaalamaya libaax kale oo soo weeraray dhasha uu masuulka ka yahay.
Ceci oo 13 jir ahaa waxa uu caan ku ahaa Baaxadiisa aadka u wayn iyo shaash madaw oo widhwidhaya.
LIbaaxa dhintay ee Cecil waxa daraasad ku waday Machad cilmi baadhista ee Jaamcada wayn ee Oxford University waxana qoorta ugu xidhnaa GPS lagula socda kolba meesha uu joogo.
Walter Palmer,oo ah dhakhtar Ilkaha ah kana yimid magaalada Minnesota ayaa la rumaysan yahay inuu bixiyay lacag dhan $50,000 (£32,000) si uu u gaadhsado Cecil.
Ugaadhsiga xayawaanka duurjoogta ah ayaa noqday ganacsi wayn sanadkii 2013 kii oo kaliya waxa Zimbaabwe laga dhoofiyay 49 madaxa libaaxa ah.
Ninka Maraykanka ah ee dilka Libaaxan gaystay ayaa la sheegay inuu iska dhigay inuu hilib siinayo libaaxa,xili habeenimo ah meel wax yar ka baxsan Seeraha Hwange National Park sidaana uu ku dilay .
Mr.Palmer waxa uu sheegay inuu moodayay in uu ugaadhsigu yahay sharci ,waxa kale oo uu ku dooday in aanu ogayn libaaxa Cecil inuu kamid yahay kuwa mamnuuca ay tahay in la ugaadhsado.
Dilka Cecil ayaa cadho wayn ka dhilayay wadanka Zimbaabwe iyo guud ahaan Dunida .
wasiirka deegaanka wadanka Zimbabwe Oppah Muchinguri ayaa wadanka maraykanka ka codsatay in Mr.Palmer loo soo gacan galiyo si loogu qaado danbiga uu galay.
Warbixintan waxa qortay BBC Africa iyadoo Ingiriisi ah waxana soo turjumay bahda Gabiley.net